Maxaad kala socotaa fadeexadda ay dowladda Iswiidhan ku dhex hafatay? | Somaliska
Maxaad kala socotaa fadeexadda ay dowladda Iswiidhan ku dhex hafatay?
Muddo maalmaho ah ayaa warbaahinta dalka waxeey aad u hadal heeysay fadeexad noocii ugu cuslaa oo ay dowladda dalkaani dhex hafatay, taas oo la xirriirta in waaxda gaadidka dalka ay xogta meleteriga iyo macluumad kale oo sir ah ay sahashay in si fudud lugu ogaan karro.
Waaxdan ayaa gacanta u gelisay maamulidda xogtan kombiyuutaradda laga haggo shaqaalo la sheegay ineey u dhasheen yurubta bari. Xogtan oo sidoo kale ay aheyd ineey noqdo mid ka dahsoon shaqaalaha shishiyee, ayaa saxaafadda dalka Iswiidhan shaaca ka qaaday halista ka iman karta xogta Qaranka iyo hey’adihiisa difaaceed oo halista galay.
Dhinaca kale warbixinta la xirriirta amuurtan ayaa Dowladda Iswiidhan muddo labbo sano ah isku dayeeysay ineey qariso bale saxaafadda ay daaha ka rogtay. Ra’iisal wasaaraha dalka oo arrintan maanta ka hadlay ayaa sheegay in bilowgii sanadkan uu ogaaday dayaacadda hey’adda gaadiidka kolkii uu shaqada ka eryey gudoomiyihii u xil saarneyd, balse ku dooday in ay sax aheyd inaan la shaacin dhac dhacdaan muddada intaas la eg, ayna muhiim u aheyd amaanka qaranka, wuxuuna sheegay in baaritaan lugu sameeyn doono heerarkii ay waaxda gaadiidka u martay markii ay gudbineeysay xogta.
“Waxan baaris ku sameeyn doonaa heerarkii ay waaxda gaadiidku u martay kolkii ay xogtan gudbineeysay, sideey wax u dhaceen iyo arrintan oo loo sameeyey si aan sharciga waafaqsaneyn. Dawladdu ayaa hey’adda sirdoonka Qaranka u xilsaaraysaa in ay dib u eegis ku sameeyaan dal-daloolada ka jira waaxda maareeysa macluumaadka sirta ah gaar ahaan dhinaca warbixinadda teknooloojiyadda” (IT-ga) ayuu yiri ra’iisal wasaare Lövfen oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan.
Fadeexadan ayaa soo shaac baxday sanadkii 2014 -tii, markaas oo waaxda gaadidka laga cabsi qabo in laga helay qeeyb ka mid macluumaadka sirta ah ee ay gacanta ku heeyso maareeynteeda, waxaa ka mid arrimaha loo maleeynayo in la helay aqoonsiga dadyowga haysta leeysinka baabuurta iyo kuwa aqoonsigoodu ay tahay in la qariyo aan la ogoleyn in la shaciyo. Macluumaadkan ayaa laga cabsi qabaa iney gacanta u galeen shirkado u shaqeeynayey waaxdan gaadiidka ku waas oo laga leeyahay dalal ku yaala yurubta bari.
Fadeexadan ayaa waxaa jaha wareer ku abuurtay xisbiyadii siyaasadeed ee dalka, waxaana haatan taagan doodo la xirriira kalsoonida dowladda lugu qabo. Ra’iisal wasaare Lövfen ayaa sheegay in kalsooni uu ku qabo wasiirkiisa arrimaha gudaha ee Anders Ygaman oo isaga qudhiisa sheegay in dhac dhacdaan la socday. Ugu dambeyntiina waxaa uu Lövfen sheegay in uu soo saarayo qorsho lugu adkeeynayo qandaraasyada dibadda la geliyo.
Hogaamiyaha xisbiga Moderat-ka oo farqaha lugu dhagan yahay